Soomaali - delibrainy LLC
Fasalo ku sabsan waxbarasho walidinta oo lacag la’aan ah, horumarin waxbarasho lacag la’aan ah oo soconaya 4 usbuuc, fasalkiba 90- daqiiqo. Fasalada waxay ka kooban yihin:
Caafimadka: hurdada, nafaqada, qosol caafimadleh, ilmaha inay active yihin, nabadgalyo, talaalo caruurta.
Waxbarashada: Ilmaha koritankoda, walidka waa macalinka ugu horeya ee ilmaha, ilaalinta koritanka ilmaha.
Qoyska: caawimada, xirirka qoyska, waqtiga qoyska, ficnanta korinta, dabeecada, edebta, ku dhaqanka edebta, inaad si fican isu dhawrto.
SHacabka: dhaqdhaaqa waxqabadka deganka, isku hagajinta dawooyinka, udoodka caafimadka, waxbarashada iyo qoyska.
Waalidinta u yimada inay bartan koritanka ilmahooda iyo wixi aqbar ku saabsan oo la xiriira koritanka ilmahoda, alabo yar oo ah hadyado iyo wax la mida ayey helayan! Fasalada way u furan yihin walidiinta oo dhan, inta uu ka koban yahay qoyska iyo heynta ilmaha yar yar oo da’dooda u dhaxayso 0-5, fasalada waxaad bilabi kartaa markasta. Isqoritanka waa inuu dhameystiran yahay marka aad bilabayso fasalka ugu horeeyo.
Si aad u aragto fasalada iyo Jadwalka taabo” Tariqda” ee ku yalaa bogan qeybtisa kore. Fasalada waa laga bixiyaa meelo badan oo Sandiego ah sida Central and East regions of Sandiego.
Fasaladan waxa lacagtoda bixiyay First 5 Sandiego iyo caawimaad ka timid Family Health Centers of San Diego Healthy Development Services. Fasaladan waxaa lagu bixiyaa English, Spanish, Arabic iyo Somali.
1B (Fasalada ku sabsan La dhaqanka)- Fasalada 1B waxa magaca uu yahay “ Talaboyin isfahamka Xaga dhaqanka Ilmahaga,” waa ilaa iyo 10 usbuuc oo taxan midkiba waa 2-saac.
Horudhaca iyo isfahanka xaga koritanka & dabecada
La talinta qofka dhaqankisa, habka niyad samida, & xaga ka warheynta naftada
Ilalinta qofka nafsidisa iyo jismigisa iyo sida uu isu arko.
Inuu helo isku filnaansho la dhaqanka
Wacyi gelin xaga luuqada & la hadalka
Talo siin xaga ciyarta iyo mala awalka.
Soo barbarian iyo dhisid inuu cunuga isku filnaado
Ilaalinta, diyaarinta iyo sida loo xaliyo hadii uu dhib ku yimaado
Talo siin xaga xiriirka, raali galinta iyo sida ka war heynta dhaqanka dabeecada.
Wixii war bixin dheraad ah oo ku saabsan fasal kasta riix halkan: Gunaanadkii 1B waa kan. ( qadka ayadoo qoran PDF file)
Waalidinta timaada waxay helayaan “Free developmental screenings” oo ah warbixin ku saabsan sida aad u caawin leheyd ilmahaga, hadyado iyo waxyalo kale oo lacag la’aan ah, fasalada wuu u furan yahay waalidinta oo dhan, qoysaska iyo dadka ku shaqo leh ilmaha ama haya, ilmaha loogu talagalay da’dooda waa 0-5 waadna imaan kartaa markasata.
2A (wax-qabad guriga dhexdisa)-
Qeybta 2A waa lacag la’aan waana waxqabad loogu talagalay in guriga dhexdisa aad ku hesho. Waa caawimad laguugu imaanayo gurigaaga si wax laguugu qabto adiga iyo ilmahaga hadii uu jiro 0-5. Macaliminta kuu imaan donto waxay kuu hayan waxbarasho lacag la’aan ah oo logu talagalay ilmahaga kuwaas oo ku saabsan sida aad oga bixi leheed dhibka. Iyo ilmaha dabeecadisa iyo ladhaqankisa, hadii uu dad wax ku dhufto, hadii u wax qaniino, ama uu dagaalamo. Cunug kasta wuxuu heli karaa 8 qeyboo oo guriga wax lagu barayo, waqtigi aad adiga dorato.
Wax qabadkan waxaa aad ku heli kartaa English, Spanish, Arabic iyo Somali. Waxana logu talagalay waalidinta ilamaha leh ama kuwa la shaqeya ilamaha. Fasaladan waxa laga bixiya Centrel and East regions of SanDiego.
Hadii aad rabto inaad ogato inaad is qori karto fasaladan ama waqtiga jadwalka si aad balan u qabsato, fadlan soo wac Mariela oo laga helo 858-675-0795 ama email uso dir referrals@delibrainy.com.
Fasaladan waxa lacagtoda bixiyay First 5 Sandiego iyo caawimaad ka timid Family Health Centers of San Diego Healthy Development Services.
2B( caawimaad fasalada iskulka dhexdoda)- Qeybta 2B waa caawimaad loogu tala galay macaliminta iyo dadka la shaqeya ilmaha da’dooda ay tahay 0-5 ee fasalka iskulaadka. Macaliminta laguu soo diro waxa ay kala shaqeyn donaan wax qabad iyo u firsimad qiimo leh oo ku saabsan wixii dhib xaga ilmahaga ah Sidoo kale ladhaqankisa, haduu dad wax ku dhufto dadka, haduu wax qaniino, ama uu la dagaalo caruurta faciis ah iyo wixii kale oo la mid ah. Cunug kasta wuxuu helayaa 6 fasal oo galaska dhexdisa ah, waqtiga adiga ayaa sameesan karo. Wax qabadkan waa lagu qaban karaa iskuladka, haduu daycare aado, ama guriyaha ilamaha lagu hayo sida family home childcare centers.
Wax qabadkan waxaa aad ku heli kartaa English, Spanish, Arabic iyo Somali. Waxana logu talagalay macaliminta la shaqeya waalidinta ilamaha leh ama kuwa la shaqeya ilamaha. Fasaladan waxa laga bixiya Centrel and East regions of SanDiego.
Hadii aad rabto inaad ogato inaad is qori karto fasaladan ama waqtiga jadwalka si aad balan u qabsato, fadlan soo wac Mariela oo laga helo 858-675-0795 ama email uso dir